တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာ နားလည်နိုင်မယ့်အချက် (၇)ချက်
လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာနိုင်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားကို ဖတ်နိုင်ခြင်းက သင့်အပေါ် သူတို့ ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ အဓိကအချက်က အမူအရာ ၁ခု၊ ၂ခုလောက်ကိုသာ အားမကိုးဖို့နဲ့ အခြေအနေကို အာရုံစိုက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်ဟန်အနေအထား ဖွင့်ထားခြင်း
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေအထားက သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်လာပြီး တင်းမာမှုတွေ ပျောက်သွားပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင် Carla Marie Manly က”တစ်စုံတစ်ယောက်က အချစ်ခံဖို့၊ ချစ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့နှလုံးသားနေရာကို ဖွင့်ထားလိမ့်မယ်” လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုချစ်နေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အနေအထားကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ချစ်တဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ မျက်လုံးက အဓိက အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ ၁၉၇၀မှာ လူမှုရေးစိတ်ပညာရှင် Zich Rubin ကစုံတွဲ ၁၅၈တွဲနဲ့ သုတေသနလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စုံတွဲတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မျက်လုံးချင်း ဘယ်လောက်ကြည့်သလဲဆိုတာကို သူရှာတွေ့သွားပြီး သူတို့ရဲ့ပါတနာနဲ့ ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းကို မေးခွန်းလွှာတစ်ခုမှာ ဖြည့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ “မကြာခဏ မျက်လုံးချင်းဆုံလေ၊ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးက ပိုခိုင်မာလေ”ဖြစ်ကြောင်းကို ရူဘင်က ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
အကယ်၍ သူက လမ်းသွားလမ်းလာတစ်ယောက် ဖြစ်မယ်၊ သင့်မျက်လုံးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သူက သင့်ကိုချစ်နေပြီလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ လူတစ်ယောက်နဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိခဲ့ကြပြီး သူတို့က သင့်အကြည့်ကို ဆက်ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် ဒါက သင့်ကို သူတို့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း ညွှန်ပြနေပါတယ်။
၃။ အနာဂတ်အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
လူတစ်ယောက်က သင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကို အမြဲလိုလိုလုပ်နေရင် သူတို့က သင်နှင့်အတူ နေလိုတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ သင့်ကလည်း သူတို့အနားမှာ ရှိနေချင်လား၊ သင့်ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေက အဆက်မပြတ် ဖြစ်လာလိမ့်မလားဆိုတာကို သူတို့သေချာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးတာမျိုးနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
၄။ မိဘတွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပေးခြင်း
သူတို့ရဲ့မိဘတွေ (ဒါမှမဟူတ်) သူငယ်ချင်းကောင်းတွေနဲ့ သင့်ကို မိတ်ဆက်ပေးတာက လက်တွဲဖော် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို လေးနက်စေလိုတဲ့ အဆင့်တစ်ခုပါ။ သူ (သို့) သူမမှာ လေးနက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိရင် တွေ့ပေးစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ပိုနီးစပ်ချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒီမေးခွန်းတွေကိုကြည့်ပြီး ဖြေကြည့်ပါ။
သင်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ထိုင်ခုံကို သင်နဲ့ပိုမိုနီးကပ်အောင် ရွေ့လာသလား?
သူတို့ရဲ့ဖုန်း (သို့) ဘောပင်ကို သင့်ဘေးမှာထားသလား?
စကားပြောတဲ့အခါ သင့်အနား ကပ်ပြောသလား?
အတူတူလမ်းလျှောက်တဲ့အခါ သင်နဲ့ပိုမိုနီးကပ်အောင် ကြိုးစားသလား?
သင့်အနေနဲ့ အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်တွေ ပေးခဲ့ရင် ဒီလူက သင့်အနားမှာ ရှိချင်နေပုံရပါတယ်။
၆။ သင့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို ချိန်ညှိခြင်း
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဝင်ရိုးစွန်းဆန့်ကျင်ဘက်တွေကို ဆွဲဆောင်ကြတယ်လို့ ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် testosterone ကြီးစိုးတဲ့ ကာရိုက်တာလို့ခေါ်သော (သရုပ်ခွဲမှု၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် စိတ်ခံစားချက်ချုပ်တည်းမှု မြင့်မားတဲ့) လူတွေဟာ ပိုစာနာတတ်သော၊ ပိုဂရုစိုက်တတ်သော၊ ယုံလွယ်တတ်သောလူတွေကို ဆွဲဆောင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ချစ်မြတ်နိုးသူတွေဟာ သူတို့ချစ်တဲ့သူရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေလေ့ရှိပါတယ်။
၇။ communication ပုံစံမှာ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာခြင်း
သင်နဲ့အတူရှိနေချိန်မှာ သူတို့ရဲ့အမူအကျင့်တွေ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲနေတာကို သတိပြုမိရင် ဒီလူက သင့်ကို စိတ်မဝင်စားတာ ဟုတ်/မဟုတ်ဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ဖို့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယုတ္တိဗေဒက အတော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ သင့်ကို မိန်းကလေးတစ်ယောက်(သို့) ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်က သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ပြသခဲ့မှာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့က အရမ်းကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ စတွေးလာကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အေးတိအေးစက်နေပုံရလာပါတယ်။